Gatii ASCII (American Standard Code for Information Interchange) arfii jalqabaa himata diraa keessaa deebisa.
Barruu: Himata diraa eeyyamamaa kamiyyuu. Arfiin jalqabaa diraa qofti barbaachisaa dha.
Furtoowwan gatiidhaan bakka buusuuf Faankishinii Asc'tti fayyadami.Yoo faankishiniin Asc diraa duwwaadhaan walquunname, LibreOffice Basic dogoggora sa'aa darbee gabaasa.Arfiilee ASCII laklamee 7 dabalatee,faankishiniin ASCII lakkaddawwan furtuu lakkadda ASCII keessaa kanneen maxxansamuu hin dandeenyes sakatta'uu ni danda'a. Faankishiniin kun arfiilee yuniikoodii laklamee 16's qabachuu ni danda'a.
Print ASC("A") REM 65 deebisa
Print ASC("Z") REM 90 deebisa
Print ASC("Las Vegas") REM 76 deebisa, sababa arfiin jalqabaa qofti xiyyeeffannoo argateef